NextMapping | Yoolalka Hormarinta Xirfadaha ee Kooxaha
Goobta shaqada ee mustaqbalku waxay u baahan tahay kooxo isku duuban hab 'hoggaamin wadaag'.
NextMapping ™ ee kooxaha ayaa ka caawiya sidii loo dhisi lahaa himilooyinka horumarinta xirfadeed ee adkeysiga, kartida iyo aragtida mustaqbalka.
Mustaqbalka, guusha kooxdu waxay noqon doontaa awooddooda ay isku maareyn karaan. ”
NextMapping Team Kooxaha U Diyaargarooba Mustaqbalka - Sida Loo Abuuro Agile, La Qabsasho & Kooxo Cusub
Mustaqbalka kooxuhu muxuu ka siinayaa cilmi-baaris iyo istiraatiijiyad ku saabsan mustaqbalka kooxaha iyo fikradaha ku saabsan sida qaab dhismeedka kooxdu uu ula jaan qaadayo si loo buuxiyo waxyaabaha carqaladeeya waqtiga dhabta ah iyo baahida adduunka isbeddelada degdegga ah. Daraasad la sameeyay ayaa muujisay in kooxo yaryar oo leh shakhsiyaad dhiirigeliya oo firfircoon ay awoodaan inay cusbooneysiiyaan oo ay dhaqso u fuliyaan. Saamaynta ganacsiga ay la leedahay kooxaha waxqabadka sare leh waa fikradaha deg degga ah ee suuqyada, xalka liita ee waayo-aragnimada macaamilka iyo ugu dambeynti faa'iidada tartanka.
Horumarinta xirfadaha mustaqbalka ee kooxaha
Kooxuhu waxay leeyihiin hadafyo horumarineed oo xirfad gaar ah iyo caqabado sida ay ugu shaqeeyaan abuurista natiijooyin aan caadi ahayn macaamiisha iyo shirkadda. Caqabadahaas waxaa ka mid ah la qabsiga xaaladda dhabta ah ee isbedelka socda, wada shaqeynta wadajirka shaqsiyaadka kaladuwan, jiilalka kaladuwan, kooxaha fog iyo fikradaha kala duwan. Habkayada gaarka ah ee tababarnimo ee ku caawinta kooxaha inay maraan 'waxa xiga' waxay siisaa qorshahayaga 'NextMapping' development qorshaha horumarinta xirfadeed ee kooxaha si firfircoon u horseedi doona isbeddelada loo baahan yahay inay hadda diyaar u noqdaan.
Mustaqbalka koorsooyinka shaqada ee khadka tooska ah
Mustaqbalka shaqada qof kasta wuxuu noqon doonaa hogaamiye ka shaqeeya dhaqanka hogaaminta wadaagga. Tan macnaheedu maahan inay jiraan dad farabadan oo leh magacyo hogaamineed - waxay la macno tahay in dhaqanka laftiisu uu diiradda saarayo qof kasta oo qaadaya mas'uuliyadda buuxda ee natiijooyinka, dhisidda xirfadaha 'is-dhexgalka' iyo kordhinta kartida shaqsiyadeed ee wadashaqeynta iyo cusboonaysiinta xawaaraha dhaqsaha badan. Mustaqbalka mustaqbalkeena ee koorsooyinka horumarinta xirfadaha shaqada ayaa ah kuwo ku saleysan fiidiyowga waxaana lagu qaadi karaa ama aan laheyn tababbar taageero.
Samee NextMapping-kaaga™ u qorshee kooxaha
Kooxuhu waxay ka kooban yihiin dad waana dad gaar ah. Yoolalka horumarinta xirfadeed ee kooxaha mustaqbalka shaqada waxay ku lug leeyihiin sii kobcinta aragtida 'aniga aniga' '. Wadashaqaynta dhabta ahi waxay ka kooban tahay qof kasta oo dhista is-barasho, isqiimeyn, iyo garasho xirfadeed. Nidaamka wadatashiga ee NextMapping we waxaan ka caawineynaa qiimeynta awooda dadka ee kooxaha, waxaan qiimeyneynaa awooda koox ahaan si wada jir ah waxaana u bixinaa xalka iyo istiraatiijiyadaha kooxaha si ay u awoodaan inay si wada jir ah ula shaqeeyaan diiradda sareysa, dhiirigelinta iyo isku xirnaanta.
Samee wada shaqeyn kooxeed
Kooxuhu waxay ku shaqeynayaan si ka xoog badan sidii hore sidii hore, waqtiyada kama dambeysta ah, bartilmaameedyada waaweyn iyo cadaadiska socda si wax yar looga qabto. Inta badan kooxdu waa ay ku liidan yihiin howlaha iyo waxa loo baahan yahay in maanta la qabto oo dhif iyo naadir in la helo fursad ay diiradda saaraan abuurista iyo u diyaargarowga carqalado ka imaan kara. Tababbarkayaga NextMapping ™ ee kooxaha waxaan siinnaa aalado iyo qorshe horumarineed NextMapping to si aan uga caawino xubnaha kooxda sidii ay mustaqbal u abuuri lahaayeen, hal abuurnimo uheli lahaayeen xallinta una dhisi lahaayeen habab kooxo ay ku wada shaqeeyaan.
Waanu kaa daboolnay - waxbadan ka ogow sida loo dhiso kooxo mustaqbal diyaar u ah goobta shaqada - gaadho waxaan jeclaan lahayn inaan kula soo xiriiro.